ရထားမကြာခဏဘရပ်ဆဲလ် – ဂျန့်မြို့မှာ, Antwerp – အသုံး, ဘရပ်ဆဲလ် – Namur. သင်သည် SNCB ရထားဖြင့်ဥရောပရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်းသွားနိုင်သည်.
SNCB ရထား မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်အနည်းငယ်သာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူ, သူတို့ကလက်ရှိဘယ်လ်ဂျီယံရထားများအတွက်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်. SNCB သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဟုတ်လျှင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်သောသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းကဲ့သို့ရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။. လူကြီးမင်း၏လက်မှတ်များကိုလူသုံးများရောင်းနိုင်သောဖိုရမ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိနေသေးသော်လည်း, SNCB သည်လက်မှတ်ရောင်းအားကိုခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ရထားကိုသိမ်းဆည်းပါအကြီးဆုံးရှိသည်, အကောင်းဆုံး, နှင့်ဥရောပရထားလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအပေးအယူ. မီးရထားအော်ပရေတာအများအပြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ရထားလက်မှတ်အရင်းအမြစ်များ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာ algorithms များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာက Save A Train ကိုစျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုကိုပေးသည်. SNCB အတွက်ဈေးသက်သာတဲ့ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရုံသာမကပဲ; SNCB အတွက်အခြားနည်းလမ်းများအတွက်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးမီးရထားဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်.
4) ရထားတွေကပိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေတယ် သင်ရထားနှင့်လေယာဉ်ပျံအကြားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, ရထားထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်. လေယာဉ်များသည်၎င်းတို့စွန့်လွှတ်လိုက်သောကာဗွန်ဓာတ်များနှင့်အတူလေထုကိုအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းစေသည်. နှိုင်းယှဉ်ရထားအများကြီးထွက်ပေးပါ လျော့နည်းကာဗွန်ညစ်ညမ်းမှု လေယာဉ်ထက်.
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားများအတွက်, subscriptions ကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, အဆိုပါ Unlimited ရာသီလက်မှတ်, နှင့်စံရာသီ. နိုင်ငံတကာအတွက်တော့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုတင်ပြီး ၀ ယ်ယူဖို့အကြံပေးပါလိမ့်မယ်.
အသုံး (Brugge – အခြားလူကြိုက်များသောဘာသာစကားဖြင့်တူညီသောမြို့နာမည်) ရထားလမ်းသည်ဖလန်းဒါးစ်ရှိနောက်ထပ်အလုပ်များသော SNCB ရထားဘူတာဖြစ်သည်. ဥပမာ, Bruges မှ, သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုအခြားသို့မှာယူနိုင်သည် လူကြိုက်များနေရာများ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာ: ဂျန့်မြို့မှာ, Antwerp, နှင့်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းအတွက်ဘရပ်ဆဲလ်. အဆိုပါ Bruges ရထားဘူတာရုံတစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 20 မိနစ်များ’ ကနေလမ်းလျှောက်အကွာအဝေး မြို့လယ်ခေါင်, နှင့်လှပသောဟောငျးစီးတီး Markt စတုရန်း.
NSB Vy Norway SBB ဆွစ်ဇာလန်